အပြန်အလှန်သွင်းဂိုးတွေနဲ့ သရေကျခဲ့ကြတဲ့ ဗီလာရီးယဲလ်နဲ့ ဘာစီလိုနာ
TUE 02 APR 2019 SPANISH LA LIGA
Villarreal44 Barcelona
Chukwueze (23' minutes), Toko Ekambi (50' minutes), Iborra (62' minutes), Bacca (80' minutes), FT Coutinho (12' minutes), Malcom (16' minutes), Messi (90' minutes), Suárez (90'+3 minutes)
3 Apr 2019 . 12:32 PM
ဒီနေ့မနက်အစောပိုင်းက ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြတဲ့ စပိန်လာလီဂါပွဲစဉ်(၃၀)မှာတော့ ဗီလာရီးယဲလ်နဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ဟာ တစ်ဖက်(၄)ဂိုးစီနဲ့ သရေကျခဲ့ကြပါတယ်။
ဗီလာရီးယဲလ် ၄ – ၄ ဘာစီလိုနာ
ဒီပွဲမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကိုတော့ ဆွာရက်ဇ် Suarez ၊ မယ်လ်ကွန် Malcom နဲ့ ကော်တင်ဟို Coutinho တို့က ဦးဆောင်လာခဲ့ပြီး မက်ဆီ Messi ကတော့ အရန်ခုံမှာသာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ ပွဲချိန်အတွင်းမှာ အလှည့်အပြောင်းများစွာကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ ပွဲအစပိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး ချဉ်းကပ်မှုပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန်(၁၂)မိနစ်နဲ့ ပွဲချိန်(၁၆)မိနစ်တွေမှာ ဘာစီလိုနာအသင်း ဦးဆောင်ဂိုးတွေရရှိခဲ့ပြီး ကော်တင်ဟို ၊ မယ်လ်ကွန်တို့က သွင်းယူခဲ့တာပါ။ ဒီလိုအနေအထားတွေကြောင့် ပွဲဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် အေးဆေးဖြစ်ခဲ့ပြီလို့ ထင်ခဲ့ရပေမယ့် ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ အကောင်းဆုံး ပြန်လာနိုင်စွမ်းကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာတော့ ပွဲဟာ ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းအတွက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းဘက်ကို (၄)ဂိုးဆက်တိုက်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ ဗီလာရီးယဲလ်အသင်းအတွက် ဂိုးတွေကိုတော့ ပွဲချိန်(၂၃ ၊ ၅၀ ၊ ၆၂ နဲ့ ၈၀ )မိနစ်တွေမှာ ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး Chukwueze ၊ Ekambi ၊ အီဘိုရာ Iborra ၊ ဘက်ကာ Bacca တို့ကသွင်းယူခဲ့တာပါ။ ဒီသွင်းဂိုးတွေမှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ခံစစ်ပိုင်းအားနည်းချက်တွေကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး ပါးနပ်မှုမရှိခဲ့သလို ပြိုင်ဘက်ကို နေရာလွတ်တွေပေးလွန်းခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန်(၈၆)မိနစ်မှာ ဗီလာရီးယဲလ်ကစားသမား Gonzalez (၂)၀ါ (၁)နီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသလို ဒီပွဲရဲ့ ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံးအချိန်တွေကတော့ ပွဲပြီးခါနီးမှစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ တတိယချေပဂိုးကို မက်ဆီ က ပွဲချိန်မိနစ်(၉၀)မှာ ဖရီးကစ်ကနေ ကန်သွင်းယူခဲ့တာပါ။ ပွဲချိန်(၉၃)မိနစ်မှာတော့ ဘာစီလိုနာအသင်း စတုတ္ထချေပဂိုးရရှိခဲ့ပြီး ဆွာရက်ဇ် က ဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေ ကန်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo: Evening Standard , Yahoo! Sports , Villareal Twitter